Wasiirka Difaaca Oo kormeer ku tagey goobo ay dagan yihiin dadkii ka barakacay Dagaalkii Guriceel “Sawirro” – Radio Muqdisho
Wasiirka Difaaca Soomaaliya General C/qaadir Sheekh Cali Diini oo socdaal shaqo ku jooga magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud, ayaa maanta kormeer ku tagey goobaha miyiga ah ee ay dagan yihiin dadkii ku barakacay dagaalkii dhawaan ka dhacay Guriceel. Waxana uu wasiirku kormeer ku tagey goobo ka baxsan magaalada qiyaastii 2okm, isagoo warbixino ka dhageystay dadka shacabka ah ee barakacay, islamarkaana balan qaaday in dowladda Soomaaliya intii awoodeeda ah ay gurmad u fidin doonto dadka shacabka ee dhibaataysan, caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ee wax haystana ugu baaqay in ay soo caawiyaan dadkan dhibaataysan kuwaas oo aysan ilaa iyo hadda wax gar-gaar ah soo gaarin.
Qaar ka mid ah dadkii ka barakacay dagaalka ee ku sugnaa goobihii uu wasiirku booqday ee deegaanka Daahir Fito, iyo Ceel-baraf ayaa uga mahadceliyey Wasiirka sida ay uga go’an tahay in nabad la helo islamarkaana ay shacabku guryahoodii dib ugu laabtaan, waxana ay codsadeen in gurmad lala soo gaaro, dowladduna ay ka shaqayso sidii nabad lagu heli lahaa.
Gen. Diini ayaa sheegay in uu aad uga xun yahay shacabkii deegaanka in ay guryahoodii isaga soo cararaan isagoo xusay in ujeedka ay gobolka u soo gaareen uu yahay sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkii ka dhacay deegaanka, islamarkaana loo soo afjari lahaa dagaalka uu dhiiga badan ku daatay.
“Kormeerka aan maanta idin kugu nimid ahmiyad ayuu noo leeyahay, wuxuuna daba socdaa nabadeyntii aan deegaanka ka wadnay. Dhibaatooyinkii ina soo gaaray 24-kii sano ee la soo dhaafay waan ka gudbi doonnaa haddi intaan Allah kaashanno aan u wada istaagno dadaalkaas. Majiro qof jecel in uu noloshiisa ku qaato goobtan ay idin ku haysato biyo la’aan, Gaajo iyo dhibaatooyin kale oo is biirsaday, dadka Soomaaliyeed ee wax haysta iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa in loo soo gurmado dadkan dhibaataysan” ayuu yiri Wasiirka Difaaca Gen. C/qaadir Sheekh Cali Diini.
Ugu dambayntii, Wasiirka ayaa ugu baaqay kuwa weli u ooman in ay barakiciyaan shacabka Soomaaliyeed in ay ka waantoobaan, sheegayna in lala xisaabtamayo dadka caadaystay barakicinta dadka maatada ah.
Maamul u sameynta degmada Balcad oo laga hadlay”SAWIRRO”
Xuska sanad guurada 2-aad ee Jimciyadda SOHEDA oo lagu qabtay Muqdisho "SAWIRRO"